​स्वाबलम्बन लघुवित्तले ७० प्रतिशत लाभांस दिने
काठमाडौं पुष २८ । स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंकका सेयरधनीलार्इ ७० प्रतिशत प्रतिफलदिने भएको छ । हालै सम्पन्न बैंकको साधारसभाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ४६.५० प्रतिशत बोनस सेयर र २३.५०..
​ओम फाइनान्स साधारणसभाले २०.५३ प्रतिशत लाभांस अनुमोदन, कामना बैंकसँग मर्ज हुने
काठमाडौं पुष २७ । ओम फाईनान्स लिमिटेडको १४औं बार्षिक साधारणसभाले लाभांस पारित गरेको छ । सभाले गत बर्षको नाफाबाट २०.५३ प्रतिशत लाभांश बितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । कम्पनीले कुल..
​कञ्चन विकास बैंकको साधरणसभाबाट २० प्रतिशत बोनस सेयर पारित, हकप्रद पनि जारी हुने
काठमाडौं पुष २७ । कञ्चन विकास बैंकको साधरणसभाले २० प्रतिशत बोनस सेयर पारित गरेको छ । त्यसैगरी बैंकको चुक्ता पुँजी बढाउन चार कित्ता सेयर बराबर एक कित्ता हकप्रद सेयर जारी..
​एनडिइपीको साधारणसभाले राइजिङसँग मर्ज हुने प्रस्ताव अनुमोदन गर्यो
काठमाडौं पुष २७ । एनडिइपी डेभलपमेन्ट बैंकको ८औं बार्षिक साधारणसभाले राइजिङ डेभलपमेन्ट बैंकसँगको स्वाप रेसियो अनुमोदन गरेको छ । दुबै बैंक मर्जरको प्रकृयामा छन् । सभाले दुवै बैंक बराबरी अनुपातमा गाभिने..
​बेष्ट रेमिट चौथो बर्षमा
काठमाडौ, पुस २५ । विश्वका विभिन्न मुलुकबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउदै आइरहेको बेष्ट रेमिट नेपाल प्रालि आफ्नो स्थापनाको तेश्रो वर्ष पार गरी चौथो बर्षमा प्रवेश गरेको छ । कम्पनीले सोही अवसरमा राजधानीमा..
​एभरेष्ट बैंकले वितरण गर्यो शुद्ध पिउने पानी
काठमाडौं पुष २३ । एभरेष्ट बैंकले बुधबार पर्सास्थित इनर्वा पुलिस चौकी र बीरगञ्ज भन्सार क्षेत्रका पैदलयात्री तथा सर्बसाधारणहरुलाई निशुल्कः शुद्ध पिउने पानी वितरण गरेको छ । एटीएम सेवा सञ्चलनको अवसर पारेर..
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयरमा नागरिक लगानी कोषको २० लाख कित्ता आवेदन, ४०१ मा आवेदन गर्नेले पुरै शेयर पाए
काठमाडौं पुष २३ । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको स्वामित्वमा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर वाँडफाँड गरिएको छ । एक वित्तीय संस्थाले अर्को वित्तीय संस्थाको सेयर राख्न नपाउने व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय बाणिज्य..
​मुसिकोट र कोहलपुर कुमारी बैंकको शाखा
काठमाडौं पुष २२ । कुमारी बैंकले रुकुमको मुसिकोट र बाँकेको कोहलपुरमा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बढीभन्दा बढी नेपालीलाई बैकिङ कारोबारमा सहभागी गराउने उद्देश्यले बैंकले ग्रामीण क्षेत्र र साना शहरहरुमा..
​राष्ट्र बैंकले १० अर्ब निक्षेप खिच्ने
काठमाडौं, पुस २२ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट फेरि १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप खिच्ने भएको छ । बजारमा अधिक तरलता भएपछि केन्द्रीय बैंकले ३ महिनाको अवधिका लागि..
​साझा विकास बैंकले पाँच करोडको सर्वसाधारण सेयर जारी गर्ने
काठमाडौं पुष २२ । धनगढीमा मुख्य कार्यालय रहेको साझा विकास बैंकले सर्वसाधारणका लागि चुक्ता पुँजीको ४९ प्रतिशत सेयर जारी गर्ने भएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता सय रुपैयाँ अंकित दरका करिब..
​सल्यानको कपुरकोटमा कुमारी बैंकको शाखा, शाखा संख्या ३४ पुग्यो
काठमाडौं पुष २१ । कुमारी बैंकले सल्यानको कपुरकोटमा ३४ औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलेले गरे । बैंकले ग्रामीण क्षेत्रलाई लक्षित..
सानिमा बैंकको नयाँ बचत खाता योजना
काठमाडौं पुष २१ । सानिमा बैंकले आफ्नो दशौं बाषिर्क उत्सबको अवसरमा उच्च ब्याज सहितको सानिमा समृद्ध बचत खाता शुरु गरेको छ । यस बचत खातामा ५.५ प्रतिशत वाषिर्क ब्याज दिने..
​पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने वाणिज्य बैंकको घोषणा
काठमाडौं, पुस २१ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले किसानलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमै ऋण दिने भएको छ । आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले किसानलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमै..
सिटी डेभलपमेन्ट बैंकको २२ प्रतिशत बोनस सेयर पारित
Posted on Jan 04 2015
काठमाडौं, पुस २० । पोखरामा प्रधान कार्यालय रहेको सिटी डेभलपमेन्ट बैंकको आठौं वाषिर्क साधारणसभाले सञ्चालक समितिका २२ प्रतिशत वोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्वतले पारित गरेको छ । बोनस सेयर..
​कन्काई विकास बैंक लिमिटेडको साधारणसभा १०.५२% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित
काठमाडौं - कन्काई विकास बैंक लिमिटेडको साधारणसभाले १०.५२% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । गतसाल बैंकको कूल सम्पत्ती रु. १ अरब ४ करोड ३२ लाख ७४ हजार,..
​चार करोडको साधारण सेयर निस्कासन गदैं आइएलएफसी माइक्रो फाइनान्स
काठमाडौं । आईएलएफसी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको तेस्रो बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । सभाको सभापतित्व संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेले गरेका थिए । इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनीको सहायक कम्पनीको..
​सिद्धार्थ बैंकको ५० करोडको ऋणपत्र पुस २३ बाट, साढे सात प्रतिशत ब्याज
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले ५० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र पुस २३ गतेबाट निस्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले साढे सात प्रतिशत ब्याज दिने गरी ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो । एक हजार..
कसमसको खुद नाफा बढ्यो
काठमाडौं - गोरखामा केन्द्रीय कार्यलय रहेको कसमस डेभलपमेन्ट बैंक लिमीटेडले गत आर्थिक वर्षमा १ सय ९७ दशमलब ७ शुन्य प्रतिशत खुद नाफा बृद्धि गर्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७०..
कृषि कर्जा काठमाडौंमा मात्र ३० प्रतिशत
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले काठमाडौं शहरमा सबैभन्दा बढी कृषि कर्जा प्रवाह गरेका छन । कृषिका लागि पर्याप्त जमिन पनि नभएको काठमाडौंमा कृषिका लागि नै सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह..
हिमालयन बैंकको २१.०५ प्रतिशत लाभांस पारित
काठमाडौं - हिमालयन बैंक लिमिटेडको २२औं बार्षिक साधारणसभाले २१.०५ प्रतिशत लाभांस पारित गरेको छ। बैंकको बुधबार भएको साधारणसभाले १५ प्रतिशत वोनस सेयर र ६.०५ प्रतिशत नगद लाभांस पारित गरेको हो। सभाले..
विश्व विकास बैंक लिमिटेड र फेवा फाइनान्स लिमिटेड मर्ज हुने
काठमाडौं पौष ८- पोखरामा प्रधान कार्यालय रहेका विश्व विकास बैंक लिमिटेड र फेवा फाइनान्स लिमिटेड मर्ज भई राष्ट्रिय स्तरको विकास बैक बन्ने भएको छ । एक कार्यक्रमका बिच विश्व विकास बैक..
​सञ्चयकोषका नवनियुक्त अध्यक्षद्धारा शपथग्रहण
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले कर्मचारी सञ्चयकोषका नवनियुक्त अध्यक्ष सुमनप्रसाद शर्मालाई सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । अर्थमन्त्रालयका सचिव शर्मा हालै सञ्चयकोषको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा नियुक्त भएका..
​वाणिज्य बैंकको पुँजी पर्याप्तता १० दशमलव ०५ प्रतिशत
काठमाडौं । लामो समयपछि सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात पुगेको छ । बैंकको पुँजी पर्याप्तता हाल १० दशमलव ०५ प्रतिशत पुगेको छ । जुन नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन..
​टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले १४.५प्रतिशत बोनस दिने
मंसिर काठमाडौं । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १४.५ प्रतिशत बोनस दिने भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको ६ प्रतिशत बोनस सेयर र ८.५ प्रतिशत नगद लाभांस दिने..
कैलास विकास बैंकको पुँजी ८९ करोड रुपैयाँ पुग्यो, साधारणसभाबाट २५ प्रतिशत लाभांस पारित,
काठमाडौं । कैलाश विकास बैंक लिमिटेडको २१औं वार्षिक साधारण सभाले २५ प्रतिशत लाभांस पारित गरेको छ । बैंकको पोखरामा सोमबार भएको साधारणसभाले १५ प्रतिशत वोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद..
तत्कालिन बुटवल फाइनान्सका कार्यकारी अध्यक्ष ध्वजु पक्राऊ
मंसिर-२२ काठमाडौं । कर्जा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा तत्कालीन बुटवल फाइनान्सका कार्यकारी अध्यक्ष देवेन्द्रप्रसाद ध्वजुलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआइबी) ले पक्राउ गरेको छ । सिआइबीको टोलीले ललितपुरको मानभवनबाट सोमबार पक्राउ..
​बैंकर्स संघको अध्यक्षमा एनएमबिका उपेन्द्र पौडेल निर्विरोध
काठमाडौं मंसिर १७ - वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षमा उपेन्द्र पौडेल निर्विरोध निर्वाचित हुने भएका छन । अध्यक्षका लागि पौडेलको मात्रै उम्मेद्धारी दर्ता भएपछि संघको शुक्रबार बस्ने साधारणसभाले..
लक्ष्मी बैंकको ३८ औं शाखा बर्दिबासमा
काठमाडौं मंसिर १ – लक्ष्मी बैंकले आफ्नो नयाँ शाखा महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासमा खोलेको छ । यससँगै बैंकको देशका २६ जिल्लाहरुमा शाखाको संख्या ३८ पुगेको छ । यसको साथै बैंकका ५० वटा एटिएम..
पोखराको लेकसाइडमा एभरेष्ट बैंकको ७६औं एटिएम
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले पोखराको लेकसाइडमा आफ्नो ७६ औं एटिएम सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । पोखरामा बैंकको यो दोस्रो एटिएम हो । उक्त एटिएमको उद्घाटन कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर रावत..
अष्ट्रेलियामा ग्लोबल आइएमई बैंकले सम्पर्क कार्यालय खोल्ने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले अष्ट्रेलियामा सम्पर्क कार्यालय खोल्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृती प्राप्त गरेको छ । बैंकले अब सम्पर्क कार्यालय खोल्ने प्रकृया सुरु गर्ने जनाएको छ । सम्पर्क..
Results 1896: You are at page 63 of 64